Faa’iidada & Faa’iido Darrada Jacaylka Aragga Koowaad – Allsomali.net | BANAADIRSOM
Home Arimaha Bulshada Faa’iidada & Faa’iido Darrada Jacaylka Aragga Koowaad – Allsomali.net
Faa’iidada & Faa’iido Darrada Jacaylka Aragga Koowaad – Allsomali.net
Jaceylka aragtida koowaad waa dareen soojiidasho deg deg ah, xad dhaaf ah oo raagta oo soo jiidaneysa qofka gebi ahaanba shisheeyaha ah. Xilligan la joogo, jacaylka aragtida koowaad wuxuu noqday mid caadi ah.
Wakhtigii Hore dadku waxa ay odhan jireen “Jacaylka dhabta ah waxa uu qaataa wakhti uu horumar ku sameeyo” Laakiin jiilka hadda jira ma aaminsana, jacaylka Araga hore waa sida dabka oo kale waxana uu noqon karaa mid wax soo saar leh ama waa mid wax bur-buriya sababta oo ah ma fiicna in uu qofna ku deg-dego doorashada qofka uu nolosha la wadaagayo.
Sida Shilinku u leeyahay laba waji jacaylka Aragtida koowaad-na waxa uu leeyahay laba waji kuwaas oo ah faa’iido iyo Faa’iido daro waxana aan halkan ku soo bandhigaynaa arimahaas.
Faa’iidooyinka Jacaylka Aragtida Koowaad:
Waxa aad dareemaysaa macaan marka aad si lama filaan ah qof u jeclaato waliba jacaylkaas noqdo mid dhab ah waxa aad bilaabaysaa in aad muddo dheer xasuunaato daqiiqadaas.
Waxa aad bilaabaysaa in aad qofka dartiis isku badashid, waxa aad bilaabaysaa in aad si qurux badan u labisatid, in aad cuntid waxa uu qofka aad jecelyahay cuno, waxa aad jeclaanaysaa dhagaysiga waxa uu jecelyahay sida heesaha iyo wax la mid ah.
Waxaad si xiiso leh u sugi doontaa qofka aad jeceshahay in aad la kulantid.
Waxa aad bilaabaysaa in aad ka fikirtid in aad mustaqbalka la wadaagtid.
Sidoo kale waxa aad biaabaysaa in aad ka fikirtid hadiyadaha aad siin doonto marka xigta ee aad la kulantid.
Waxa aad sidoo kale bilaabaysaa in aad lama filaan uga dhigto waxa uu jecelyahay.
Faa’iido Darooyinka Jacaylka Aragtida Koowaad:
Waxay noqon kartaa uun soojiidasho. Jacaylka araga hore wuxuu lamid yahay xiisaha oo kale sababta oo ah waxa uu u baahanyahay wakhti si uu isugu badalo jacayl.
Waxaa jira fursado aanu qofka kale wax jacayl ah kuu qabin adiga.
Waxba kama ogid qofka. Haddii aad bilowdid in aan ka fikirtid mustaqbalkiina qofkaas waxa aad ku jirtaa xaalad khatar ah sababta oo ah qofka wakhti yar kuma ogaan kartid wanaagiisa iyo xumaantiisa.
Ma jirto wax aad isaga mid thihiin, Tusaale ahaan dookhyada iyo qaab nololeedka iyo wax la mid ah.
Waxa aad ciyaar indho La’aan ah la ciyaaraysaa mustaqbalkaaga.
Qofka aad jeclaatay ayaa laga yaabaa in uu been yahay kulanka ugu horeeya.
Previous articleLiverpool Iyo Man United Oo Wadahadalo Kula Jira Wakiilka Sual Niguez Laakiin Hal Shardi Ku Heli Kara Saxiixa Xiddiga. – banaadirsom